मैले ५ वर्षको लागि नोकरलाई निर्वाचित गराएर पठाउनुहोस भनेको हो – Radio Hatemalo FM
मैले ५ वर्षको लागि नोकरलाई निर्वाचित गराएर पठाउनुहोस भनेको हो
बाँके जिल्लाको डुडुवा गाउँपालिका अवसर र चुनौती दुवैसँगसँगै भएको स्थान हो । नागरिकले आफ्नो क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि अन्य उम्मेदवार भन्दा नेपाली काँग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका नरेन्द्र कुमार चौधरीलाई निर्वाचित बनाए । पाँच वर्षका लागि जनताको नोकर बन्न तयार भए र मलाई गाउँपालिकामा बसेर जनताको काम गर्ने अवसर दिएका छन् भन्दै आफुलाई जनताको नोकर भन्न रुचाउने नरेन्द्र कुमार चौधरी, डुडुवा गाउँपालिका अध्यक्षसँग रेडियो हातेमालोका रेडियो कार्यक्रम संवाद डबलीमा लिईएको अन्तर्वाता
अहिले सम्मको गाउँपालिका अध्यक्षको अनुभव ?
निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडी म कुनै रोल(भूमिका)मा थिइन । एउटा समाज सेवाको रुपमा काम गर्दै आएको थिए । तर निर्वाचित भएर आइसकेपछि अहिले हाम्रो काँधमा धेरै जिम्मेवारी थपिएको छ । २०७२ को संविधानमा गाँउपालिकालाई एउटा सरकारको रुपमा जिम्मेवारी दिइसकेपछि त्यो संविधानको भावना र मनसाय अनुरुप मैलेपनि जनताको पहुँच त्यो सिधै आफ्नो सरकारसँग होस् भन्ने चाहना राखेर हाम्रो डुडुवा गाँउपालिकाको कार्यक्रमहरु बनाइरहेका छु ।
उम्मेदवार बन्दा सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरमा तपाईको पनि नारा थियो त्यो अधिकार अहिले तपाईले नागरिकलाई दिन सक्नुभएको छ ?
डुडुवा गाँउपालिकामा दैविक प्रकोपले प्रत्येक वर्ष हानी पु¥याएको हुन्छ । जनको भन्दा पनि धनको धेरै नोक्सानी बनाएको हुन्छ । वर्षायाममा जनताका घर पानीमुनी हुन्छन । यो राप्ती किनारको क्षेत्र हो त्यसैले पनि पानीकै क्षति बढी हुने गरेको छ । त्यस प्रकारको प्रकोपबाट निम्त्याएका समस्या समाधान मै चार पाँच महिना हाम्रो त्यसैमा समय गयो । त्यसपछि हामीले गाँउ कार्यपालिकाबाट पास भएका केही योजनाहरु भइरहेको छ । भनेको जस्तो सिंहदरबारको अधिकार त्यति अनुभव नभए पनि केही त हामीले अनुमुति बनाईरहेका छौँ ।
जस्तै, प्रत्येक नागरिकको हेल्थ कार्ड, अहिले वडा नं. १ नं देखि ६ वडा सम्म प्रत्येक नागरिकको घरघरमा गएर वितरण लिने कार्यक्रम छ । त्यसैगरी, हामीले पशु हेल्थ कार्ड वितरण गरिसकेका छौँ । तिन पटकसम्म हामीले फिक्सिङ निःशुल्क उपलब्ध गराई सकेका छौँ । कृतिम गर्वाधानको काम जारी छ । फागुन एक गते देखि प्रत्येक किसानको घरमा पशु डाक्टरको नम्वर सहितको कार्ड छ । किसानलाई केही समस्या भयो भने तुरुन्त फोन गर्दछन र डाक्टर एक घन्टा भित्र पुगेर निःशुल्क पशुको उपचार गर्छन ।
गाँउपालिकामा पशु चिकित्सक कति छन र ?
हाम्रो गाँउपालिकामा अहिले पशु चिकित्सक ७ जना छन् ।
पशुपालनमा परम्परागत भन्दा केही फरक छ ?
अहिले सम्म रहेको जुन पशु जनावरहरु छन त्यसलाई औषधी उपचार गर्दै र ति पशु जनावरबाट कृतिम गर्भाधान गराएर उन्नत जातको आउने सन्ततीहरुबाट जन्माउने प्रयास गरेका छौँ । अनि त्यो अटोमेटीक(क्रमिक) त्यो नयाँ पुस्ता आईसकेपछि पुरानो पुस्ता भन्दा फाइदाजनक हुन्छन भन्ने हो । एकैचोटी उन्नत जातको पशु किन्दाखेरी डेढलाख खर्चे र किन्नु पर्छ । त्यसो नगरेर हामीले त्यही जनावरलाई एक दुई वर्षपछि त त्यही जनावरबाट नै राम्रो हुने खालका कार्यक्रमहरु लिएका छौँ ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले संचालन गरेका स्थानीय तहमा के फरक ?
गुनासो नभएको होईन, सँगसँगै अर्को कुरा पनि छ, जुन पहिले परम्परागत रुपमा चल्दै आएको शासन व्यवस्था, पञ्च्यायत अथवा गाविस हुदा कर्मचारीले चलाउदै आएको भन्दा अहिले धेरै फरक भएको छ । साविकको गाविससँग जोडेर हामीले कुरै गर्न मिल्दैन । त्यो समयमा गाविसलाई सिमित दायरा भित्र राखेको थियो । अहिले त गाँउपालिका तेस्रो तहको सरकारको रुपमा लिईसके पछि हाम्रो सोच त्यो भन्दा फरक बनाएका छौँ । अनि हामीलाई संविधानले जुन किसिमको तेस्रो तहको रुपमा अधिकार दिएको छ त्यही अनुरुप प्रत्येक नागरिकलाई हामीले सेवा दिने हो दिएका छौँ । जनताले प्रगति भएको अनुभुति गरेका छन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
नरेन्द्र चौधरी बाठो, चनाखो त्यसैले नागरिकलाई सेवा दिने भन्दा पनि फकाई फुल्याई पठाउछ भन्ने कुरा पनि छ ?
नरेन्द्र चौधरी बाठो भएर होईन तपाईलाई म स्पस्ट पार्न चाहन्छु । हामी चुनाव लड्दै गर्दा मैले जनताहरुलाई कहिल्यै पनि निर्वाचित गराउनुहोस भनेको होइन । मैले यत्ति भनेको हो “अबको ५ वर्षको लागि तपाईको यो नोक्करलाई निर्वाचित गराएर पठाउनुहोस पाँच वर्ष सम्म मैले तपाईहरुको काम गरे भने पुन अर्को पटक पठाउनुहोला नत्र भने अर्को पटक तपाई कहाँ भोट माग्न आउँदा लात हानेर पठाउनुहोला ।”त्यही अनुरुप आज पनि त्यही मालिकहरुसँग कुनै पनि योजना सञ्चालन गर्नु भन्दा अगाडी हामीले त्यहाँ गएर सोच्छाँै । र उहाँहरुले गरेका माग अनुसार हामीले कार्यपालिकामा बसेर पास गर्छौँ । अनि जनताको सोच अनुसारको काम भएको छ ।
नागरिकका सबै माग पुरा गराउनु भएको छ त ?
मैले प्रदेश र संघीय सरकारसँग धेरै अपेक्षा गरेका छौँ । सरकारले हाम्रो संरचनालाई जुनकिसिमको सेवा दिएको छ त्यसले हामी धेरै फड्को मार्न सक्दैनौ । हाम्रो यो एरिया(क्षेत्र)मा डुडुवा र राप्ती नदि छन् । डुडुवामा तीन चार ठाउँमा पुल बनाउनु पर्ने अवस्था छ । त्यो हाम्रो आफ्नो स्रोत साधनले हुनै सक्दैन । दोस्रो कुरा संघ तथा प्रदेश सँग हाम्रो के माग छ भन्दा यो डुडुवा गाँउपालिका क्षेत्रभित्र २ । ४ वटा कलकारखाना खोलिदिन प¥यो, त्यति ठूलो नभए पनी जस्तै सोनो चिनि मिल राखिदियो भने हाम्रो राप्तीे क्षेत्रमा ऊखु उत्पादन हुने धेरै ठूलो सम्भावना छ । कलकारखाना भयो भने एउटा रोजगारको पनि सृजना हुन्छ । यसमा संघ तथा प्रदेशको सहयोगको आवश्यकता परेको छ भनेर हामीले लिखित पत्र समेत पठाएका छौँ । तपाई मार्फत पनी यो अनुरोध गर्दछौँ । हामीले अहिले यसका वारेमा सर्वेक्षण गर्ने काम गरिरहेका छौँ र पछि मुख्यमन्त्री लगाएत प्रधानमन्त्री समक्ष डेलिगेसनमा जाने तयारी गर्दै छौं ।
अबसर धेरै छन की चुनौती ?
एकदमै तपाईले महत्वपूर्ण सवाल सोध्नुभायो । यो मुस्लिम समुदायमा शैक्षिक स्तर हेर्ने हो भने सून्य देखि १० प्रतिशत भन्दा माथि छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यहाँ कुरा के छ भने अव स्थानीय तहलाई शिक्षा सञ्चालनको अधिकार भएपछि हामी पञ्छिन मिल्दैन । यसमा हामीले शिक्षा ऐन पारित गरिसकेका छौँ । नियमावली लगभग तयारको स्थितिमा छ । कार्यविधि हामीले बनाईसकेका छौँ । अव म तपार्ईसँग एउटा सानो मनमा लागेको कुरा गर्न चाहन्छु । के भन्दा जुन स्थिति हाम्रो सामुदायिक विद्यालयमा ६ वटा भन्दा बढी गाडी बजारबाट हाम्रो गाँउमा १० वटा वस आउछ विद्यार्थी लिन त्यहाँ सबैमान्छेले प्रत्येक महिना १ हजार देखि १५ सय मासिक तिरेर पढाउँछ । सबैको गरिबिको अवस्थामा त छैनन् भनेपछि त्यस निजि स्कुलमा पढाउने शिक्षकले १० हजार मासिक पाउछ भने त्यहि शिक्षकले यस सरकारी विद्यालयमा पढाउदा मासिक २५ हजार पाउछ ३० हजार पाउछ तर ३० हजार पाउने ठाउँमा पढाई नहुने नीजिमा हुने । नीजि विद्यालयमा एउटा पुस्तक पनि निशुल्क पाईदैन यसमा राज्यले छात्रबृक्ति पोसाक सम्मको सेवा उपलब्ध गराउ छ । त्यति गर्दा पनि सरकारी स्कुलमा पढाई राम्रो भएको छैन ।
यो त तपाईको चुनौती भएन र ?
चुनौती छ । यो चुनौतीलाई हामी चिर्दै छौं । अब शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि गरी बजारबाट आउने बसलाई रोकेर हामीकहाँ कमसेकम एसईई सम्म हाम्रै गाँउपालिकामा नै प्रत्येक नागरिकले गुण्नस्तरीय शिक्षा पाउने गरी काम गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ ।
नागरिकले विश्वास गर्ने्आधारहरु के हुन ?
आधार होइन । विश्वास हो । हामी काम गर्दछौं । त्यो किसिमको संकल्प हुनु प¥र्यो, सोच हुन प¥र्याे । मलाई लाग्दैन कि संकल्प गरिसकेपछि सफल नहोला भन्ने मलाई लाग्दैन ।
दलगत राजनीतिले गाउँपालिकाको निर्णय प्रभावित भएका छ ?
योे बहुमतको र अल्पमतको कुरामा यस्तो छ । विकास निर्माणको काम त रोकिने भन्ने कुरा भएन यो त सबैको साझा हो । गाँउसभामा हाम्रो बहुमत नभए पनि कार्यपालिकामा हाम्रो बहुमत छ । कार्यपालिकामा हाम्रो प्रतिपक्ष साथीहरुले पनि सहयोग गर्दै आइरहनु भएको छ । हामी विकासमा विश्वास गर्द छौं ।
नियम, कानुन सम्म दलगत राजनीति प्रवेश गरेको छैन ?
त्यस्तो भएको छैन । अव विपक्ष भए पछि यो डेमोक्रेसी(प्रजातन्त्र)मा फाटफुट त भइहाल्छ । तर यस्तो छ लोकलन्त्रमा विपक्ष भएन भने त यो फेरी निरंकुुश भएर जान्छ । प्रतिपक्षले यदि झम्झक्याएन भने त्यहाँ सफल हुदैन । यसमा विपक्षको पनि निकै भुमिका हुन्छ । विपक्ष भएन भने विकास नै हुदैन । त्यसले गर्दा हामीले पनि विपक्षको कुरा सुन्नु पर्छ र हामीले पनि त्यो कुरालाई आत्मसाथ गरेका छौँ । आफ्नो त्रुटीहरुलाई सच्याएर हामी पनि अगाडि बढेका छौँ ।
एजेण्डामा फकाईफुलाई ?
हैन, हाम्रो समट्ने आधार भनेको भिजन हो । जुन हाम्रो गाँउपालिकाको भिजन छ । हामीले जितेर आइसकेपछि गाँउपालिकाको मिटिङमा सर्वप्रथम घरघरमा व्यक्तिगत हेल्थकार्ड, पशु हेल्थकार्ड, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, तिरो उठाउने काम , घरदैलो गर्दै आएका छौं । जग्गा व्यवस्थापन गर्ने, राप्ती नदिले हजारौँको जग्गा कटान गरेको छ ति जग्गाको पहिचान गर्ने, भुमिहिनहरु ३० देखि ५० वर्ष देखि पहिले घर बनाएर बसेका छन तिनको स्रेस्ता पाएका छैनन् । हो तिनै कार्यक्रमलाई व्यवस्थापन गर्ने र रोजगारको सृजना गर्ने छ ।
तपाईलाई कस्ले सहयोग गरेको छ ?
नरेन्द्र चौधरीले सिधै आमाको काखबाट सिकेर आएको हैैन । म प्रजातन्त्र स्थापना लगतै नेपाली काँग्रेस पार्टीमा छिरेको त्यसपछि अहिले सम्म पार्टीको विभिन्न तहमा बसेर काम गरेको र खास हाम्रो व्यागग्राउण्ड केहो भने हामी गरिव मान्छेको छेउछाउको बाट आएको तिनकै छेउछाउमा बसेर सबैकुरा त्यही बाट सिकेका हाँै । माथिबाट सिकेको होइन । अव लोकतान्त्रिी कुराहरु पढेर सिके पनि धेरै कुरा हामीले यहि बाट सिकेर आएको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्षलाई किन यति मूल्यवान गाडी चाहिने ?
कुनै समयमा रामलाई मन पराउने त मान्छे थिए भने मैले त १५ हजार मतदाले भोट हाल्दा ५ हजार मतपाएर जितेका हो । मेरा बिरुद्ध पनि १० हजार मान्छे त थिएनी । ति १० हजार मान्छले त नरेन्द्र चौधरीलाई चाहेका होइनन् नि । एउटा यो प्रकृयागत रुपमा चल्दा अरुको भन्दा मेरो मत धेरै भएर मैले जिलेको होनी । म भन्दा बढी त मेरा विपक्षीसँग मत छ । म भन्दा फरक सोचका मान्छेहरु छन् भनेपछि त्यो भन्ने कुरा त ठूलो भएन । त्यो सबै चुनौतीलाई चिरेर जनताको घरदैलोमा संविधानले व्यवस्था गराए बमोजिम हामीले जनताको घर दैलोमा सेवा पु¥याउनु पर्छ । गाडी खरिद गरेका छौं आवश्यकताले हो ।
नदि कटान छ बाटाहरु कच्ची छन ?
सडकका बारेमा कुरा गर्दा पक्की एउटा मात्र छ । त्यो पनि नेपालगन्जबाट बेतहनी सम्मको हो । अरु अहिले हुलाकी सडक पनि बन्दै छ । अरु जति पनि सडक छ त्यो सबै माटो र फाटफुट रुपमा ग्रावल छ । भनेपछि हाम्रो आफ्नो स्रोतसाधनले हुन सक्दैन प्रदेशलाई गुहार लगाउनु पर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो गुनासो सुनाउनु पर्छ । हामी तपाई मार्फत पनि भन्न चाहान्छौँ, सहयोग दाता आउनुहोस, हाम्रो डुुडुवा गाँउपालिकामा लगानी गर्नुहोस । त्यसैले हाम्रो स्रोत साधनले यो गाँउपालिका समृद्ध हुन्छ भनेर हामीले जनातालई आश्वसन दिन सक्दैनौँ र सहयोगीहरु खोज्नु पर्छ ।
अब डुडुवा कुन रुपमा चिनिने छ ?
डुडुवालाई चिनाउनका लागि त्यस किसिमको स्रोतसाधन त छैन । तर एउटा योजना के छ भने यस गाँउपालिकालाई अन्नबालीको वीउ उत्पादन केन्द्रका रुपमा चिनाउने, यहाँ गुणस्तरीय, राम्रो वीउ उत्पादन गरी डुडुवामा विउलाई खपत गरेर पनि नेपालभर यस ठाउँको वीउलाई वितरण गर्ने योजना छ । अरु खासै त्यस किसिमको केही पनि छैन ।
पशु क्षेत्रमा लगानी गरे अनुसारको उत्पादन के हुन्छ ?
यस क्षेत्रमा नेपालकै तेस्रो नम्बर पर्न सफल किसान हुनुहुन्छ । उहाँलाई हामीले केही सेवा उपलब्ध बनाए जस्तै अन्य वीउ उत्पादन देखि लिएर पशुको उत्पान सम्म र तिनलाई बजारीकरण गर्नका लागि पहिले नै योजना बनाउने र विक्री गर्ने स्थानको खोजि गर्ने काम हुनेछ ।
गाँउपालिका अध्यक्ष भएर अनुभुति गर्ने गरी परिवर्तन गर्न सम्भव छ ?
परिवर्तन गर्ने त्यति सजिलो छैन । एउटाले मात्र गरेर हुने परिवर्तन होईन । यो पाँच वर्ष सम्म भनेको जस्तै परिवर्तन नभएपनि केही न केही पविर्तन हुन्छ । हामी सधै यस्तो भन्ने गर्दछौँ कि तपाई जस्ता अग्रज पत्रकार आएर हाम्रा राम्रा नरामा्र पक्षको वकालत गरेपछि सबैको सहयोग मिलेपछि परिवर्तन सम्भव नै नभएको हो भन्न मिल्दैन । विकास हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ । हाम्रो विकास, सबैको विकास भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
Posted in अन्तर्वार्ता, मुख्य समाचार, राजनीति, समाचार, समाज
कोरोना भाइरस संक्रमित संख्या १४ पुग्यो, २ जना नयाँ संक्रमित भेटिए
रोल्पामा राष्ट्रिय अक्षर महोत्सव हुँदै
खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष कक्षपतिद्वारा दुई बालबालिकाको शैक्षिक अभिभावकत्व ग्रहण
चौहरजारी नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यार्थीलाई निःशुल्क पोषाक वितरण